Ibhekwe ngabomvu inkulumo kaZuma | IOL Isolezwe
Ibhekwe ngabomvu inkulumo kaZuma
Isolezwe / 13 February 2013, 10:41am / CELANI SIKHAKHANE
uMengemali Jacob Zuma okubhekwe ukuthi inkulumo yakhe icacise ukuthi azosunguleka kanjani amathuba emisebenzi. Lapha wathathwa ngonyaka odlule nePhini lakhe uMnuz Kgalema Motlanthe noSomlomo wePhalamende uMnuz Max Sisulu kuvulwa iPhalamende eKapa.
INKULUMO kaMengameli Jacob Zuma azobe eyethulela isizwe sonkana kusasa kubhekwe ukuthi icacise ngamathuba emisebenzi iphinde igxile kwezemfundo ikakhulukazi kwezokuqeqeshwa ngamakhono nokubuya komhlaba kubantu.
Lokhu kube imibono yabahlaziyi abehlukene abebebheka kabanzi ezinye zezinto uMengameli azogxila kuzo enkulumeni yakhe yesizwe okuzobe kungeyesine kulo nyaka selokhu athatha izintambo ngo-2009.
USolwazi Bonke Dumisa oyisazi kwezomnotho uthe okubhekwe kakhulu uhlelo olubizwa ngeNational Development Plan okuyilo oluzoba umkhomba ndlela wokuthi ingqalasizinda izothuthukiswa kanjani nanokuthi amathuba emisebenzi wona azosunguleka kanjani.
“Nakuba inkulumo yakhe ingeke yehluke kangako kulena ayenze engqungqutheleni ye-ANC eMangaung ngoDisemba kodwa okumele akucacise udaba lokuthi ngabe amathuba emisebenzi azodaleka kanjani kulolu hlelo lwengqalasizinda alumemezele enkulumeni yesizwe yangonyaka odlule.Okunye esikubhekile ukuthi amemezele izinhlelo zamathuba emisebenzi ezizohambisana nohlelo lwemfundo yezikhungo zokuqeqeshwa ngokwamakhono ama-FET, okuyiyo egqugquzelwayo kulezi zinsuku,” kusho uDumisa.
Ubesho lokhu echaza ukuthi lolu hlelo lwe-NDP yilona oluzoba umkhomba ndlela entuthukweni yasezindaweni zasemakhaya nasekutheni umnotho ungakhiwa kanjani kuzo ngoba zisadinga kakhulu uma ziqhathaniswa nezasemadolobheni.
Inkulumo kaMengameli yangonyaka odlule yagxekwa ngamaqembu aphikisayo ayekhala ngokuthi kwakungekho okutheni kuyo kodwa kwakugcwele izethembiso okwakubonakala ukuthi ngeke zifezeke. Kulesi sikhalo kwakuhlangene nodaba lwamathuba emisebenzi ayethenjiswe nguMengameli kodwa okwagcina sekuthiwa kunalokho kulahleke imisebenzi ebalelwa esigidini.
USolwazi Dumisa uthe okunye okuzoba seqhulwini udaba lwemihlomulo yentsha engasebenzi wathi kodwa nakuba kunezinhlaka ezidlelana ne-ANC ezifana neCosatu ezingahambisani nalokhu kodwa uMengameli kubhekekile ukuthi asho ukuthi kuzokwenzakani .
Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi Somadoda Fikeni uthe nakuba amaqembu aphikisayo engamhlasela uZuma ngodaba lwamathuba emisebenzi kodwa uhlelo lwe-NDP yilona azocasha ngalo ngoba luqukethe konke ekutheni amathuba emisebenzi azodaleka kanjani futhi olokuqala ngqa ukuthi lubekhona.
“Ngaphandle kwalokho ezinye izinto angazithinta enkulumeni yakhe ezibhekwe kabanzi udaba lwentuthuko yaseNkandla nomuzi wakhe ukuze aphebeze amaqembu aphikisayo abanga umsindo ngalo. Okunye ukuba acacise mayelana nokusebenza koMthethosisekelo okunezikhalo ngawo zokuthi kunokugxambukela noma ukubukeleka kwawo phansi ngwenxa yezepolitiki,” kusho uSolwazi Fikeni.
Inkulumo kaZuma uzoyethula kusukela ngehora lesikhombisa ebusuku kanti ngaphambi kwalokho kuzoqala kube uhlelo lokungena kwezikhulu zikahulumeni ezahlukene, zidlisa ngengqephu.